Luciano Spalletti oo kulan adag ka filaya ciyaartoydiisa kulanka FC Porto – Gool FM
(Roma) 16 Agoosto 2016 Tababaraha kooxda Roma Luciano Spalletti ayaa muujiyay inuu kulan adag ka filayo ciyaartoyda kooxdiisa kulanka adag ee ay habeen dambe laciyaari doonaan FC Porto isreeb reebka Champions League.
Luciano Spalletti ayaa xaqiijiyay in Kevin Strootman oo ku soo bilaaban doono kulanka FC Porto wuxuuna intaa ku daray inuu u baahanyahay ciyaartoyda nafta u huraya kooxda kulankaas.
Roma ayaa ku dadaalaysa inay u soo baxdo wareega guruubyada ee koobka horyaalada yurub si ay ugu suuro gasho inay ka soo muuqato Champions League xiliciyaareed kan.
“Roma waxay doonaysaa marwalba inay joogto meel sare sidaas dateed waxaan u baahanahay ciyaartoy aad u fiican, Bruno Peres waa mid kamid ah ciyaartoydaas” ayuu yiri tababare Luciano Spalletti.
“Kevin Strootman waa uu ku soo bilaaban doonaa, sidoo kale kulan walba goonidiisa ayaa loo go’aamin doonaa goolhayaha ku soo bilaaban doona, dhamaan boosaska kalena waa lamid, waxaa ciyaari doona kaliya ciyaartoyda diyaarka ah”.
“Barri waxaan u baahanahay ciyaartoy awooda inay nafta u huraan kooxda kuwaas oo caawinaya asxaabtooda si loo hiigsado hadafka kooxda”.
Pepe Reina oo nafsad ahaantiisa isku soo bandhigay Barcelona si uu u buuxiyo booska...
CHAMPIONS LEAGUE: Man City oo guul gaartay xilli Aguero uu dhaliyay saddexleey misane uu labo rigoore khasaariyay...+SAWIRRO